एक्वा स्लाइड | पानी स्लाइड निर्माता - खेल संरचना - aquaslide.fr
(+ 33) 960_351 830 (स्थानीय कल लागत)
(+ 33) 633_263 910 (व्हाट्सएप)
मेरो शपिंग कार्ट
पुस्तिकाको सम्पर्क उद्धरण विशेष प्रस्तावहरू साझा समाचारपत्र
ग्राहक सेवा कम्पनी हाम्रो संलग्नताहरू डिजाइन कार्यालयवितरक बन्नुहोस् ट्र्याकिंग नियन्त्रण वितरण प्रेस क्षेत्र भर्ती व्यक्तिगत विवरणहरू उद्धरण हमसे संपर्क गर्नुहोस-Nous
समाचार र अवलोकन स्लाइड
भावना - प्रदर्शन - सुरक्षा
तपाईंको ब्राउजर अनुरोध गर्नुहोस्
निजी सौंदर्य जहाँ यो वाटरस्लाइड लक्जरी र टेक्नोलोजी द्वारा किनारा। यो शिविर साइट आफैलाई एक उल्लेखनीय रत्न प्रदान गर्दछ जब सबैभन्दा सुन्दर toboggan जलीय शानदार कार्यक्रमको फ्ल्यागशिपहरूका बीचमा यसको ठाउँ बनाउँदछ। एक्वा स्लाइड ब्रह्माण्डमा सुरू गर्नुहोस् र एक्वाटिक उपकरणहरू र रमाईलो खेलहरूको सबैभन्दा पूर्ण श्रृंखला पत्ता लगाउनुहोस्।
- यसको फराकिलो दायरा पत्ता लगाउनुहोस् toboggan जलीय र हाम्रो सूचीको लागि सोध्नुहोस्।
पानी पार्क स्लाइड
यसको लागी उपायहरू र उपायहरू toboggan पानी पार्क एक्वा स्लाइड। यसको प्रोफाइल र यसको खण्डहरू यसलाई एक असाधारण चरित्र दिन्छ। समानता बिना, यो toboggan पानी पार्क यो आफ्नो समयको प्रतिबिम्ब हो र निश्चित रूपमा डिजाइन र राजसीय अवधारणाको आधारमा बेन्चमार्क हो।
- एक्वा स्लाइड दायरा र यसको लागि सोध्नुहोस् स्लाइडहरू पानी पार्क समयको साथ एर्गोनोमिक्समा ...
एक्लो र अद्वितीय, को संयोजन पूल स्लाइड महत्वाकांक्षी परियोजनाले शोकको सन्दर्भमा दुस्साहस आर्किटेक्चरल प्रभुत्वलाई चुनौती दिन्छ। अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, यो toboggan पूल चलनबाट बाहिर निस्कने इच्छालाई अभिव्यक्त गर्दछ, किनकि परम्पराहरूबाट भाग्नु बच्चाहरूको आनन्दको लागि आवश्यक छ।
- एक AquaSlide हस्ताक्षर र एक विश्व प्रसिद्ध निर्माता बाट गुणवत्ता पूल स्लाइड लागू गर्नुहोस्।
परिणाम अलग, पानी खेल एक राम्रो सेटिंग मा रोपण, एक लुकाउने प्रलोभन मा किशोरहरुलाई चलाउँछ। यसको वास्तुकलाबाट प्रभावित, यो प्रतिष्ठित पानी खेल एक सनसनी को कारण र छिटो बच्चाहरु को लागी बहु खेल को थिएटर भयो। पानी स्लाइडहरूको संयोजन, मेयर र भिन्न उपकरण। एक सुरक्षित ठाउँमा फ्लिप - फ्लप, तिनीहरूको उदारता को प्रमाण, तिनीहरूको जादुई कल्पना र भ्रम।
- तपाईंको ब्रोशर अनुरोध गर्नुहोस् jeu जलीय साझा खुशी।
RARETE सीमित, प्रिस्क्रिप्टरहरू यसमा स्न्याप गर्दै छन् कस्टम-निर्मित खेल संरचना असाधारण मिश्रणहरूमा। अतुलनीय आनन्दको लागि डिजाइन गरिएको, यो भव्य खेल संरचना, हाम्रो डिजाइन अफिसले सबैभन्दा ठूलो हेरचाहको साथ विकसित गरिएको, बहु संयोजनहरूको दायराको शीर्षमा प्रदान गर्दछ जुन अन्तत: सस्तो छ। टेक्नोलोजीको एउटा विलक्षण संश्लेषण प्याम्पर्ड बच्चाहरूको उन्मादको रूपमा छोडियो ...
- तपाईंको मांग शिविरको लागि मूल्य संरचना खेल विशाल कल्पनाहरु को साथ।
भित्री खेल क्षेत्र
वातावरण र नयाँ चलनहरूको सही सहयोगभित्री खेल क्षेत्र हाम्रो शैक्षिक आवश्यकताहरूसँग पूर्ण सहमतिमा विकासको प्रतिबिम्ब हो। लेआउटको सम्पत्ती र बहु ​​सम्भावनाहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्भित्री खेल क्षेत्र तिनीहरू आकर्षक छन् को रूप मा प्रभावी। हाम्रो रमाईलो खेलहरू जस्तै, यो व्यावसायिक खेल संरचना साना बच्चाहरूको विकास द्वारा भिन्न छ।
नयाँ ट्रेन्ड, दुबै अनौंठो र स्नोबिश, यो जंगली नदी तपाइँलाई फुर्सत र विश्राममा पुर्‍याउँछ। साहसीहरूको ट्रेलमा जंगली नदी एक घुमाउरो र विदेशी कोर्सको साथ तपाइँको स्वर्गीय सेटिंगमा पर्खन्छ। अन्वेषण र पौराणिक कथाको प्रेमी, प्रेरणाको अद्भुत स्थानमा अभाव छैन लासी नदी ou ढिलो नदी.
- जंगली, उत्साहजनक नदीको आनन्द खोज्नुहोस्!
XXL पौंडी पोखरी संलग्नक
यसको हेराइट ब्रान्ड ठूलो पोखरी संलग्नक शिविरका लागि अनुपम प्रगतिको सही हस्ताक्षर चिह्नित। यसका लागि ठूलो पोखरी घेरा, हामीलाई समय अवधि मा ध्यान केन्द्रित गरौं। वास्तवमा तपाईले यसलाई आफ्नो सन्तानहरूमा हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ! अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो छाप छोड्दै, एक्वा स्लाइड स्विमिंग पूल एन्क्लोजर सुपरस्ट्रक्चरमा पवित्रस्थानको शिखरमा पुगेको छ।
- नामकरण सोध्नुहोस् पौंडी पोखरी AquaSlide एक उदार डिजाइन को साथ।
सौंदर्य र लक्स्यूरि हाइलाइट गर्दछ पोखरी फर्नीचर. फेसन अब सपनाको क्याचर होइन तर अत्यावश्यक छ। एक्वा स्लाइड, वातावरण र कल्याणको सिर्जनाकर्ता, तपाइँले तपाइँको ग्राहकहरूको स्वादमा संशोधित पोखरी फर्निचर पत्ता लगाउँनुहुन्छ। हाम्रो पोखरी फर्नीचरको विचित्र संग्रहले असाधारण कल्पनाहरूलाई जवाफ दिन्छ।
- स्विमिंग पूल फर्नीचर, शैली र भव्यता वर्गहरूमा सर्फ गर्नुहोस्।
तपाईंको सपनाहरूको उत्कृष्टता बढाउन असफल भएको हामी हाम्रो मल्टि-ब्रान्ड समूहमा स्पटलाइट चम्काऔं।
नवीनता भन्दा अगाडि एक कदम, हाम्रो उत्तम सहयोगीले हाम्रो Years० बर्षको गतिविधि बारे सत्यको गन्ध लिन्छ।
एक्वा स्लाइड, पहिलो युरोपमा पौंडी खेल्ने उपकरणको फराकिलो दायरा विकास गर्दैछ, एक्वा स्लाइडले यसको रूपमा कार्य गर्दछ पानी स्लाइड निर्माता, पौंडी पोखरी स्लाइड, पानी पार्क स्लाइड र पानी खेल।
AquaSlide अब रूपमा एक प्रमुख स्थिति छ पूल स्लाइड निर्माता फ्रान्स र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खेल संरचना, इनडोर खेल क्षेत्र तर जंगली नदी, पोखरी संलग्न र पूल फर्नीचर।
हाम्रो डिजाईन अफिसले तपाईका परियोजनाहरूको समाधानलाई निरन्तर रूपान्तरण गर्दछ, तपाईलाई तपाईको अध्ययनको प्रत्येक चरणमा समर्थन गर्दछ र तपाईको दायित्वहरूको स्टक लिन्छ।
हाम्रो बहु-अनुशासनात्मक टीमहरूको ज्ञान कसरी उच्चतम मागहरू र मानकोंलाई पूरा गर्दछ पेशेवर पानी स्लाइड धेरै विशेष व्यापार संग जोडिएको।
एक्वा स्लाइड क्षेत्रहरूमा सर्वव्यापी छ, बाहिरी होटेलहरू र पानी पार्कहरू यसको क्रेडिटको सन्दर्भको पोर्टफोलियोको साथ।
प्रत्येक परियोजना यसको समय को एक प्रतिबिम्ब हो ...
... हाम्रो सन्दर्भ हो
मेरो एक्वा स्लाइड
१ che चेमीन डु BOLS - 14 34150१XNUMX० पुछाबोन (फ्रान्स)
यो इ-मेल ठेगाना स्प्याम्बोटहरू विरुद्ध सुरक्षित गरिएको छ। तपाईलाई यो जाभास्क्रिप्ट सक्षम गर्न अनिवार्य छ।
एक्वा ब्रेक स्लाइड
खुला पानी स्लाइड
बहु ट्रयाक पानी स्लाइड
सर्पिल पानी स्लाइड
छिटो पानी स्लाइड
परिवार पानी स्लाइड
ट्यूब पानी स्लाइड
यू-आकारको पानी स्लाइड
पानी स्लाइड डुबकी
इनडोर पानी स्लाइड
जमीनमा राख्न स्लाइड
क्याम्पि sl स्लाइड निर्माता
पानी पार्क स्लाइड निर्माता
होटल टोबोगन निर्माता
पानी स्लाइड भिडियो
पानी स्लाइड किट
किटमा सीढी र गेटवे
सानो पूल स्लाइड
सीधा पूल स्लाइड
पौंडी पोखरी स्लाइड
पूल स्लाइड भिडियो
सानो पानी खेलौना
बच्चाहरूको पानी खेल
वयस्क पानी खेल
पेशेवरहरूको लागि पानी खेलौना
एक्वाटिक खेल संरचनाहरू
ठूला जलीय संरचना
सानो जलीय संरचना
पानी खेल भिडियो
पानी खेल मैदानहरू
एक्वाकेट डाकू जहाज
मिनी डु water्गा पानी पार्क
खजाना टापु पानी पार्क
स्पेसशिप पानी पार्क
रकेट वाटर पार्क
जंगल पानी पार्क
चाटेउ पानी पार्क
अन्डरवाटर वाटर पार्क
सानो पानी स्लाइड
मिनी वाटर स्लाइड भिडियो
एक्वाटिक खेल क्षेत्रहरू
पानी जेट पार्क
सुख्खा खेल मैदान
एक्वाटिक खेल उपकरण
पानी खेलौना निर्माता
एक्वाटिक खेल मैदान निर्माता
पानी खेलौना संरचना निर्माता
एक्वाटिक संरचना निर्माणकर्ता
क्याम्पि water पानी खिलौना निर्माता
पानी पार्क खेल निर्माता
सानो खेल संरचना
बच्चाहरूको खेल संरचना
आउटडोर खेल संरचना
धातु खेल संरचना
प्लास्टिक खेल संरचना
ट्यूबलर खेल संरचना
टावरको साथ खेल
स्लाइडको साथ खेल्नुहोस्
भिडियो संरचना बाहिरी खेल
बहु गतिविधि खेल संरचना
थिम खेल संरचना
संरचना खेल कोर्स
खेल मैदान संरचना
स्लाइडको साथ संरचना प्ले गर्नुहोस्
शिविरका लागि संरचना प्ले गर्नुहोस्
स्लाइडको साथ भिडियो खेल संरचना
उपकरण संरचना खेलहरू
संरचना निर्माता खेल्नुहोस्
बच्चाहरूको खेल संरचना निर्माता
शिविर खेल संरचना निर्माणकर्ता
सानो इनडोर खेल क्षेत्र
इन्डोर बच्चाहरूको खेल क्षेत्र
धातु खेल क्षेत्र
प्लास्टिक खेल क्षेत्र
ट्यूबलर खेल क्षेत्र
इन्डोर स्लाइड खेल क्षेत्र
बहु गतिविधि खेल क्षेत्र
थिम खेल क्षेत्र
खेल मैदान कोर्स
स्लाइडको साथ मैदान मैदान
शिविरका लागि खेल मैदान
बलको साथ खेल मैदान
स्लाइडको साथ भिडियो खेल क्षेत्र
इन्डोर खेल पार्क
इन्डोर खेल पार्क निर्माता
इन्डोर खेल क्षेत्र निर्माता
क्याम्पिंग खेल मैदान मैदान निर्माता
होटल खेल मैदान निर्माता
KIT मा नदी
कृत्रिम रक स्विमिंग पूल
जंगली नदी भिडियो
ठूलो पौंडी पोखरी संलग्नक
क्याम्पिंग स्विमिंग पूल संलग्न
होटल लाउन्ज कुर्सी
पोडियम र स्टेज
सदमा अवशोषित भुईं
पूल लिफ्ट सीट असक्षमको लागि
© प्रतिलिपि अधिकार २०१ - - Aquaslide.fr - सबै अधिकार सुरक्षित - छाप - TOS - सर्तहरू
नयाँ भावनाहरू यहाँ सुरू हुन्छ
एक्वा स्लाइड बाहिरी होटल, छुट्टी गाउँ र मनोरन्जन केन्द्रहरूको लागि एक अनलाइन बिक्री साइट हो। होटल उद्योग, समुदाय ... एक्वा स्लाइड शिविरस्थलहरू, नगरपालिका पौंडी पोखरीहरूमा पनि उपयुक्त छ, तर स्पोर्ट्स क्लबहरू, पानी पार्कहरू, आदि।
हाम्रो पानी पार्क स्लाइड जस्तै, पौंडी पोखरी स्लाइडहरू र अनुकूलन पानी स्लाइडहरू, हाम्रो प्रासंगिकता फेला पार्नुहोस् पानी खेल, खेल मैदानहरू र खेल संरचनाहरू।
यस क्षेत्रमा विस्तारित वन्य नदाहरू र पौंडी पोखरीको फर्नीचरलाई फाइदा पुर्‍याउन प्रतिष्ठित दायरा विस्तार गरिएको छ पानी स्लाइड निर्माता क्याम्पिंग को लागी।
एक्वा स्लाइड र यसको डिजाइन कार्यालय, तपाईंको प्रोजेक्टको राजदूत, उत्तम सेवा / विश्वसनीयता / सुरक्षा र ग्यारेन्टी गर्दछ पानी स्लाइड मूल्यहरु राम्रो गुण को।
प्रख्यात एक्वास्लाइड प्रोग्राम पत्ता लगाउनुहोस्, एक व्यक्तिगत उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् वा अनलाइन अर्डर गर्नुहोस्।
एक्वास्लाइड.फ्राको स्वादमा सर्फिंग गरेर तपाईंको रमाईलो ठाउँ बढाउनुहोस्
र हाम्रो सेक्सन खोज्नुहोस् अनुकूलन स्लाइड निर्माता एक्वा स्लाइड
साइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। एक्वा स्लाइड साइट प्रयोग गर्न जारी राखेर वा "सम्झौता" मा क्लिक गरेर, तपाईं कुकीजको प्रयोगलाई अधिकृत गर्नुहुन्छ, जुन हाम्रो मा दर्साईएको छ। गोपनीयता नीति